आज कति छ अमेरिकी डलरको भाउ, अन्य देशको मुद्राको विनिमयदर कति ? - ArthikBazar.com
Home अन्तर्राष्ट्रिय आज कति छ अमेरिकी डलरको भाउ, अन्य देशको मुद्राको विनिमयदर कति ?
आज कति छ अमेरिकी डलरको भाउ, अन्य देशको मुद्राको विनिमयदर कति ?
आज एक अमेरिकी डलरको खरिददर १२०.९२ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२१.५२ रुपैयाँ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजको विदेशी विनिमयदर तोक्दै डलरको बिक्रीदर १२१ रुपैयाँभन्दा माथि कायम भएको जनाएको हो । यसैगरी, एक यूरोको खरिददर १३१.८५ रुपैयाँ र बिक्रीदर १३२.५१ रुपैयाँ तथा स्र्टलिङ पाउण्डको खरिददर १५८.१५ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५८.९४ रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै, अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर ९१.५५ रुपैयाँ र ९२ रुपैयाँ छ ।
यता सिंगापुर डलरको खरिददर ८८.८६ रुपैयाँ छ भने बिक्रीदर ८९.४० रुपैयाँ तथा १० जापानी येनको खरिददर ९.७६ रुपैयाँ कायम हुँदा बिक्रीदर ९.८० रुपैयाँ कायम छ । १९.०१ रुपैयाँमा खरिद भइरहेको चिनियाँ युवानको बिक्रीदर १९.१९ रुपैयाँ छ । यस्तै, ३२.२४ रुपैयाँ खरिद मूल्य तोकिएको साउद रियालको बिक्रीदर ३२.४० रुपैयाँ छ भने ३३.०९ रुपैयाँमा खरिद भइरहेको कतारी रियालको बिक्री मूल्य ३३.२६ रुपैयाँ छ ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को दिरामको खरिददर ३२.९२ रुपैयाँ हुँदा ३३.०९ रुपैयाँ बिक्रीदर तोकिएको केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ । यस्तै, मलेसियाको रिंगटको खरिद मूल्य २८.६९ रुपैयाँ र बिक्रीमूल्य २८.८३ रुपैयाँ छ ।
Previous articleसुनको मूल्य ९९ हजार रुपैयाँ
Next articleसंघले लुम्बिनीलाई ६८९ खानेपानी आयोजना हस्तान्तरण गर्‍यो, तर बजेट नदिँदा ४८७ आयोजना अलपत्र
गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालालाई प्रदेशले थप्यो बजेट
गगन थापाले भने– सेयर बजारलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनैपर्छ
मुक्तिनाथ विकास बैंकद्वारा चण्डेश्वरी आधारभूत विद्यालयलाई सहयोग